Simba rinogadziriswa Mahara emahara
Isaac | 14/09/2021 09:00 | Zvemagetsi zvigadzirwa
Chimwe chezvinhu zvakachinjika uye zvakakosha kune chero zvemagetsi studio kana musangano ndeye simba rinodzika. Nayo unogona kufudza ese marudzi emacircuit, uchikwanisa kuisa akasiyana ma voltages uye masimba ari nyore kugadziriswa. Saka unogona kukanganwa nezvevamwe mabhatiri kana maadapter yakanangana nedunhu rega.
Una magetsi zvakasikwa kune ako ese mapurojekiti. Uye zvakare, haisi kungoshandiswa chete kupa simba padunhu, unogona zvakare kuishandisa seye chishandiso chekuyedza, nekuti uchazokwanisa kuona kana a componente kana dunhu rinoshanda nemazvo kana iwe uchiibata nemazano ema probes ayo ...
1 Chii chinonzi dimmable magetsi?
1.1 Maitiro ekusarudza yakanaka inodonha font
2 Zvirinani zvinodzima magetsi emagetsi
Chii chinonzi dimmable magetsi?
Pane chinonzi magetsi, uye nemisimboti yekushanda, isu tatozvitaurira pane ino blog. Nekudaro, kana zvasvika kune simba rinodzika, Ine musiyano mudiki neakajairika iwo.
Simba rekushandisa mudziyo unokwanisa kupa simba remagetsi kudunhu kana chinhu. Zvakanaka, kana uchitaura nezvesimba risingadzimike, ndimo mairi ma voltages anogona kugadziriswa mukati meimwe nhanho, uye kunyangwe magetsi. Saka hauzove neyakagadziriswa goho re3v3, 5v, 12v, nezvimwe, asi iwe unogona kusarudza iro simba raunoda.
Maitiro ekusarudza yakanaka inodonha font
Kusarudza yakanaka inodzikira magetsi, iwe unofanirwa kuenda kune zvinoverengeka zvezvinhu izvo iwe unofanirwa kufunga. Saka unogona kutenga chigadzirwa chinonyatsoenderana nezvido zvako:
Budget: chinhu chekutanga kuona kuti imarii yaunoda kushandisa pane yako inogadziriswa magetsi, nekuti nenzira iyi iwe unogona kuenda kune yakasarudzika mhando yemamodeli uye kubvisa zvese zviri kunze kwezvaunogona kuita.
ZvinodiwaChinhu chinotevera kuona kuti chii chauchazoshandisa simba rako risingadzimike, kana zviri zvevamwe vanogadzira kana mapurojekiti e DIY, kana iri yebazi rehunyanzvi, rekushandisa zvine hunyanzvi mumusangano wemagetsi, nezvimwe. Izvi zvakare zvinoona kana iwe uchida chimwe chinhu chakavimbika uye chinodhura, kana kana iwe uchigutsikana neyakareruka imwe.
Marca: kune akati wandei mabrandi anomira kupfuura mamwe ese. Asi iwe haufanire kunge uine hanya nazvo futi. Nguva dzose, kana chiri chiziviso chinonyanya kuzivikanwa, iwe unenge uine zvivimbiso zvemhando yepamusoro uye nerutsigiro zvirinani kana paitika chinhu.
Unyanzvi hunhu: Izvi ndezvangu chaizvo, uye zvinoenderana nezvamuri kutsvaga. Asi funga nezverudzii rwema voltages uye mafashama aunowanzoda, kukodzera izvo. Simba rakatsigirwa (W) raizove rakakoshawo.
Zvirinani zvinodzima magetsi emagetsi
Kana uri kutarisa simba rakanaka risingadzimiki, apa iwe unogona kuona mamwe emhando dzakakurudzirwa uye mhando:
PeakTech 1525: ibasa rakavimbika uye rine simba remagetsi asingadzimiki. Iyi modhi inogona kutangira kubva pa1-16 volts ezvakananga zvazvino, uye kubva pa0-40A musimba, kunyange paine mamwe anodhura mamodheru anogona kusvika 60A. Iyo ine LED skrini paunogona kuverenga zvazvino magetsi uye zvazvino maitirwo, pamwe nehungwaru kutonhora sisitimu uchishandisa mafeni, uye 3 zvinogoneka presets.
Baugger Wanptek Nps1203W: imwe yeakanakisa mamodheru echinogadziriswa sosi, ine chinobuda chinokwana 0-120v DC, uye 0-3A. Nedhijitari yekuratidzira kuti ugone kunyatsoona iwo akapihwa kukosha, compact size, yakachengeteka, uye iine nyore manyorerwo ekudzora.
COODEN Kiyi: iri nyore simba rinogadziriswa remagetsi rakakodzera kushandiswa kwemusha nema hobbyists nema laboratories, uye kunyangwe nzvimbo dzekudzidzisa. Inosanganisira kuratidzwa kwedhijitari kuti utarise kukosha kwekupa, uye inogona kutemerwa kubva pa0-30 volts uye 0-10 amps eazvino kudhara.
Uniroi DC: Iyi sosi inobvumira kugadzirisa kubva pa0 kusvika 32 volts, uye kubva pa0 kusvika 10.2 amps. Iine chinogadziriswa chaicho che0.01v uye 0.001A. With hombe, chiine akatungamirira ratidza, akangwara tembiricha kudzora, uye hwakavimbika zvikuru.
RockSeed RS305P: Simba rinogadziriswa nekugadzirisa simba re 0-30V, uye 0-5A. Iine 4-manhamba, matanhatu-seti LED inoratidzira, epamberi magadzirirwo, ndangariro, uye kugona kubatanidza kune PC kuburikidza ne USB tambo yekubatanidza neWindows-chete inoenderana software.
Hanmatek HM305: font yakafanana neiya yapfuura, iine yakawanda compact, yakapusa uye yakachipa saizi. Inosanganisira LED skrini yekutarisa zvazvino nemagetsi magetsi. Iyo inobvumira iko nyore kugadzirisa kweiyo voltage pakati 0-30V uye yazvino pakati pe 0-5A. Kune zvimwe zvakasiyana izvo zvinogona kukwira kusvika ku10A.
Kaiweets cc: iyi imwe modhi iri zvakare pakati pezvakanakisa, iine rondedzero yazvino yekupa uye nehukuru hwakanyanya hwekutonga kwekuburitsa. Inogona kuenda kubva ku0 kusvika ku30V uye kubva pa0 kusvika 10A. Iyo zvakare ine LED yekuratidzira uye 5v / 2A simba USB chiteshi.
ChiitikoIyo ndeimwe yemhando dzakanakisa dzemagetsi anodzikira kunze uko, uye mutengo wawo unokwezva. Iyi modhi inobvumidza murawo kubva pa0 kusvika makumi matatu volts, uye kubva pa30 kusvika gumi amps. Iine hukuru hwe0-digit LED kuratidza, compact size, yakavimbika kwazvo uye yakachengeteka, uye ine alligator tambo / bvunzo mitsara inosanganisirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Zvemagetsi zvigadzirwa » Chinogadziriswa magetsi: chii icho, chinoshanda sei, ndechei